အပင်တို့ ၏ ခုခံကာကွယ်⁠ရေးစနစ်များ( The Plant of Defence Systems ) - Myanmar Farmers' Portal
Home ဆောင်းပါး အပင်တို့ ၏ ခုခံကာကွယ်⁠ရေးစနစ်များ( The Plant of Defence Systems )
အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များအကြောင်း မရေးသားမီ ဖိစီးမှုများကို ဦးစွာဖော်ပြပါမည်။
“Stress” ဖိစီးမှုများကို သက်မဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရသော အဇီဝဖိစီးမှုများ(Abiotic Stress)နှင့်
သက်ရှိများကြောင့် ဖြစ်ရသော ဇီဝဖိစီးမှုများ(Biotic Stress) ဟူ၍ ၂ မျိုး
သက်မဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရသော အဇီဝဖိစီးမှုများ(Abiotic Stress) –
– အပူချိန်မြင့်မားခြင်း(Hight temperature)
– အပူချိန်နိမ့်ကျခြင်း( Low temperature )
– ရေဝပ်ခြင်း(Water Logging)
– လေပြင်းတိုက်ခက်ခံရခြင်း( Wind )
– မိုးခေါင်ခြင်း( Drought )
– စိုထိုင်းစလျော့နည်းခြင်း( Low Humidity )
– အလင်းရောင်မလုံလောက်ခြင်း(Low sunlight)
– သတ္တုအဆိပ်သင့်ခြင်း(Heavy Metal Toxicity)
– ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်း( Transplanting )
– ဆားငံရည်ဒဏ်( Salinity )
သက်ရှိကြောင့် ဖြစ်ရသော ဇီဝဖိစီးမှုများ(Biotic Stress) –
– အပင်စားသတ္တဝါများ( Herbivorous )
– ပိုးမွှားရောဂါများ( Pests )
– ဘက်တီးရီးယားများ( Bacteria )
– မြေသန်ကောင်များ( Nematodes )
– မှိုများ( Fungs )
– ဗိုင်းရပ်စ်များ( Virus )
အထက်ဖော်ပြပါ ဖိစီးမှုတစ်ခုခုသည် အပင်တို့အပေါ် သက်ရောက်ခြင်းကြောင့် အပင်တို့တွင် ခုခံကာကွယ်နိုင်သောစနစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဖိစီးမှုတစ်ခုခု၏ သက်ရောက် မှုဒဏ်ကို ခုခံကာကွယ်ရန် (သို့) လျော့ချရန် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စနစ်များကို ခုခံကာကွယ်ရေး စနစ်များ( Defence System ) ဟု ခေါ်သည်။
ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်တို့သည် သက်ရောက်လာသည့် ဖိစီးမှုအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်၍ တုံ့ ပြန်မှုနှင့် ခုခံကာကွယ်မှုပုံစံတို့သည် အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေပြီး အပင်မျိုးစိတ်အပေါ်မူတည်၍လည်း
ဥပမာ – အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ခြင်း
ရာသီဥတုကောင်းမွန်သော ပုံမှန်အခြေအနေတွင် အရွက်များ၏ မျက်နှာပြင်တွင်ရှိနေသော
လေပေါက်များ(Stomata) ၏ ဖွင့်ခြင်း/ပိတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် နရီစည်းချက်များအတိုင်း
ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည်။ သို့သော် လေပေါက်များပွင့်နေချိန်တွင် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကဲ့သို့ ဖိစီးမှု(Stress) သက်ရောက်လာပါက ပွင့်နေသည့် လေပေါက်များကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး ပုံမှန်လည်ပတ်နေသည့် နရီစည်းချက်( Circadian Rhythms ) ကို ပြောင်းလဲလိုက်ကြသည်။
ပုံမှန်အခြေအနေတွင် လေပေါက်များပွင့်နေခြင်းသည် အပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သည့်ဓာတ်ငွေ့လဲလှယ်ခြင်း(Exchange of gases)၊ ပင်ရည်ငွေ့ပျံခြင်း( Transpiration ) ကဲ့သို့သောအပင် ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်ဖြစ်သော် လည်း လေပေါက်များ(Stomata) ပွင့်နေချိန်တွင် အပင်အတွင်း ပင်ရည်ငွေ့ ပျံခြင်း(Transpiration) ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေပျောက်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပုံမှန် အခြေအနေထက် အပူချိန်မြင့်မားနေချိန်တွင် Transpiration နှုန်းသည် မြင့်မားသောကြောင့် အပင်အတွင်း ရေပျောက်ဆုံးခြင်းနှုန်းသည်လည်းအလွန်လျင်မြန်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားနေချိန် တွင် Transpiration နှုန်း မြင့်မားခြင်းသည် အပင်တွင်း ရေဓာတ်ခန်းခြောက်၍ အပင်ညှိုးခြင်း(Plant Wilting) ဖြစ်စေနိုင်သည်။ဆိုလိုသည် မှာ အပူချိန်မြင့်မားနေချိန်တွင် လေပေါက်များ(Stomata) ပွင့်နေခြင်းသည်အပင်အတွင်း ပင်ရည်ငွေ့ပျံခြင်း(Transpiration) ကို မြင့်မားစေသဖြင့် အပင်တို့ အသက်ရှင်ရပ် တည်နိုင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။
အပူချိန်မြင့်မားနေချိန်တွင် Transpiration ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းမဖြစ်ေ စရန်လေပေါက်များ(Stomata)ကို ပိတ်ပစ်၍ Transpiration နှုန်းကို ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းသည်
အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ရန်
လေပေါက်များ(Stomata) ပိတ်ပစ်ခြင်းအပြင် အရွက်လိပ်ခြင်း( Leaf rolling )၊ အရွက်များကို
ချွေချပစ်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာတို့ကိုလည်း အပင်တချို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
အရွက်လိပ်ခြင်း( Leaf rolling ) လက္ခဏာကို ခရမ်းချဉ်ပင်၊ ပြောင်းပင်နှင့် ညောင်ပင်အရွက်များတွင် အများဆုံးတွေ့ရှိရသည်။ အရွက်လိပ်ခြင်းသည် အပင်အတွင်း ရေဓာတ်များ လျော့နည်းလာ၍ ပြန့်တင်းအား(Turgor pressure) လျော့ကျသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ တချို့သောသူတို့က ညောင်ရွက်များ အရွက်လိပ်ခြင်းအား ညောင်ရွက်ကန်တော့ထိုးခြင်းဟု ပြောဆိုကြပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အား ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း ယုံကြည်နေကြသည်။ အမှန်စင်စစ် ညောင်ရွက်ကန်တော့ထိုးခြင်းအား သိပ္ပံနည်းကျ အဖြေရှာကြည့်သည့်အခါ အပင်အတွင်း ရေဓာတ်လျော့နည်းနေချိန် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပူချိန်မြင့်မားသည့်အခါ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုသက်သာစေရန် သဘာဝအရ အရွက်များကို လိပ်ပြစ်ခြင်းသည်။ တနည်းဆိုရသော် အပင်အတွင်း ရေဓာတ်နည်းလာ၍ ပြန့်တင်းအား(Turgor pressure) လျော့ကျသွားခြင်း ဖြစ်ပြီး အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
တချို့သော ရွက်ကြွေပင်များတွင် အပင်အတွင်း ရေဓာတ်လျော့နည်းချိန် ပတ်ဝန်းကျင်၌
အပူချိန်မြင့်မားလာပါက အပင်ပေါ်ရှိ အရွက်များကို ချွေချလေ့ရှိသည်။ လေပေါက်များ ပိတ်ပစ်ခြင်း၊ အရွက်လိပ်ခြင်း၊ အရွက်များချွေချပစ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်တို့သည် အပင်တို့တွင် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ် သည့် အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကို ခုခံကာကွယ်နေသော
အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များအကြောင်း –
အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုး၏ သက်ရောက်မှုဒဏ်ကို
ခုခံကာကွယ်ရန် ဖြစ်ပေါ်လာသောစနစ်များကို ခုခံကာကွယ်စနစ်များအဖြစ် အကြမ်းဖျင်း
သိရှိပြီးနောက် ဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးမှ အပင်စားသတ္တဝါများ(Herbivorous)ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခု ခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ အကြောင်းကိုသာ ယခုစာစုတွင် အဓိကထား ရေးသားသွားမည်ဖြစ်၍ တခြားသော ဖိစီးမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခုခံကာကွယ်ရေး စနစ်များအကြောင်းကို နောက်ပိုင်း အလျဉ်းသင့်ပါက သီးခြား ရေးသားဖော်ပြပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်ရာ ဤကမ္ဘာကြီးသည် သက်ရှိများနှင့် လွှမ်းခြုံထားသော သက်ရှိကမ္ဘာ
( Living Planet ) တစ်ခုဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ စကြဝဠာအတွင်း
ဂြိုလ်ကမ္ဘာဟုလည်း ဆိုကြသည်။ သက်ရှိကမ္ဘာတွင် နေထိုင်ကြသော သက်ရှိများ
ရှင်သန်ရန်တည်နိုင်ရန် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးသော ရင်းမြစ်များတွင် အစားအစာသည်လည်း
တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေသည်။ အစားအစာအတွက် သက်ရှိအချင်းချင်း
အပြန်ပြန်အလှန်လှန် မှီခိုနေရသည့် ဖြစ်စဉ်ကို အစာကွင်းဆက်( Food chains ) ဟု ခေါ်သည်။
အပင်တို့သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အစာချက်လုပ်နိုင်ကြသည်။
၎င်းဖြစ်စဉ်ကို အလင်းမှီအစာစုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်စဉ် ( Photosynthesis ) ဖြစ်စဉ်ဟု ခေါ်တွင်ပြီး
ဓာတုဖြစ်စဉ်များတွင် အခြေခံအကျဆုံးနှင့် ကြီးကျယ်ခန်းနားဆုံး Phenomenon
ဖြစ်သည်ဟုဆိုရသော် လွန်မည်မထင်ပါ။ အပင်တို့သည် Photosynthesis ဖြစ်စဉ်မှ
ရရှိလာသော စွမ်းအင်များကို ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးအတွက် အသုံးပြုရသည်။ Photosynthesis ဖြစ်စဉ် မှ အစပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော အပင်တစ်သျှူးများကို အပင်စားသတ္တဝါတို့က စားသုံးကြရသည်။
ဤသည်မှာ အစာကွင်းဆက်(Food chains) ၏ ကနဦးအစဖြစ်သည်။
အစာကွင်းဆက်၏ အစဖြစ်သော အပင်တို့ကို ထုတ်လုပ်သူ(Producer) ဟု ခေါ်ဆို၍
အပင်စားသတ္တဝါများကို ပထမစားသုံးသူ (Primary consumers) သို့မဟုတ် အပင်စားသတ္တဝါများ(Herbivorous)ဟုခေါ်သည်။
အပင်စားသတ္တဝါများတွင် နှံကောင်၊ ပျား၊ ရှဉ့်၊ ယုန်နှင့် သမင်များအပါအဝင် အပင်တို့ကိုသာ စားသုံးသည့် အပင်စားသတ္တဝါများဖြစ်၍ အဆိုပါ အပင်စားသတ္တဝါများကို စားသုံးကြသည့်
သတ္တဝါများကို အသားစားသတ္တဝါများ ( Carnivorous ) သို့မဟုတ် ဒုတိယစားသုံးသူများ
( Secondary consumers )ဟု ခေါ်သည်။ အသားစားသတ္တဝါများတွင် မြွေ၊ ဖား၊ ကြောင်နှင့်
ပုတ်သင်များအပါဝင် အသားစားသတ္တဝါငယ်များကို စားသုံးကြသည့် အသားစားသတ္တဝါကြီးများ
သို့မဟုတ် တတိယစားသုံးသူများကို (Tertiary consumer) ဟု ခေါ်သည်။
ဥပမာ – ဝက်ဝံ၊ သိန်းငှက်၊ ကျား၊ ငါးမန်း ထိုမှတဖန် အပင်များ၊ သတ္တဝါများ သေဆုံးခဲ့သော်
၎င်းတို့ကို စားသုံးသည့် မှိုများနှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို ချေဖျက်သူများ( Decomposers )ဟု ခေါ်သည်။
ခြွင်းချက်အဖြစ် မသေဆုံးသေးသော သက်ရှိတို့၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် Decomposers များကို တွေ့ရသည်။
ထိုမှ တဆင့်ပြီး တဆင့် စားသောက်ခဲ့ရာ နောက်ဆုံးတွင် အပင်များ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်
အာဟာရများ( Nutrients ) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။
ယင်းကဲ့သို့ သက်ရှိအချင်းချင်း စားသောက်ကြသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံ၍ အစာကွင်းစက်
( Food chains ) ဟု ခေါ်ဆိုသည်
အစာကွင်းစက်အကြောင်း အကြမ်းဖျင်းသိရှိပြီးနောက် အပင်တို့၏ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များအကြောင်း
ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အစာကွင်းဆက်၏ အခြေခံအုတ်မြစ်တွင် အပင်စားသတ္တဝါတို့က အပင်တို့ကိုစားသုံးကြောင်းသိနိုင်သည်။
တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ရွေ့လျားမှုမပြုနိုင်သည့် အစားခံ အပင်များကို အပင်စားသတ္တဝါများ
အလွန်အကျွံ စားသုံးမှုမပြုနိုင်ရန် ဟန့်တားခြင်း၊ တွန်းလှန်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်း စနစ်များကို ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးယန္တရားများဟု သက်မှတ်သည်။
ခုခံကာကွယ်ရေးယန္တရားသည် အပင်တို့၏ တစ်သျှူးများ( ပင်စည်၊ အရွက်၊ အမြစ်များနှင့် မျိုးပွားအင်္ဂါများ ) ကို အပင်စားသတ္တဝါများ အလွန်အကျွံ
စားသုံးခြင်းကြောင့် သတ္တလောကအတွင်း တစ်ဖက်စောင်းနင်းမဖြစ်ရအောင် သဘာဝတရားက အမြဲပဲ့ကိုင်ပေးထားသော သဘာဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ခုခံကာကွယ်ရေး ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်( Evolution )
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံမှ နှစ်သန်း ၇၅၀ ကြား ကပ်ကမ္ဘာဖြစ်သည့် ပရိုတယ်ရို ဇိုးရစ်ကပ်ကမ္ဘာ(Proterozoic Aeon) ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အပင်များတွင် ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ မဖွံ့ဖြိုးသေးဘဲ အစားခံသက်သက်သာ ဖြစ်တည်ခဲ့ကြပြီး
သဘာဝ၏ ရွေးချယ်မှု(Natural selection) အရ အပင်တို့သည် အပင်စားသတ္တဝါများ၏
အစားခံဘဝသက်သက်မှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် အချိန်ကာလတစ်ခု ဖြတ်သန်းပြီး တဖြည်းဖြည်း ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲခဲ့သော ကာကွယ်ရေးစနစ်များသည်
အပင်စားသတ္တဝါများ၏ စားသုံးခံရခြင်းကို ဟန့်တား ကန့်သတ်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိသည်။
အပင်စားသတ္တဝါများ၏ စားသုံးခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများက
၎င်းတို့ အသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရန် သဘာဝက လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခွင့်ပေးထားသကဲ့သို့
ကျွန်တော် လေ့လာသိရှိထားသလောက် အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များသည် အပင်မျိုးစိတ်အလိုက် အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေကြသည်။ အပင်မျိုးစိတ် တစ်မျိုးခြင်းစီတွင်
ခုခံကာကွယ်ရေး စနစ် တစ်မျိုးမျိုးအား ပိုင်ဆိုင်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး
တချို့သော အပင်မျိုးစိတ်များမှာတော့ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ် တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တစ်မျိုးထက်ပို၍ ပိုင်ဆိုင်ထားတက်ကြသည်။
အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ် တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးသည် ချိတ်ဆက်နေပြီး တချို့လည်း သီးသန့်အသွင်ဆောင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ ထူးခြားချက်အဖြစ် လေ့လာတွေ့ရှိရသည်မှာ
ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များသည် မျိုးစိတ်တူ အပင်အချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း၊
မျိုးစိတ်မတူသော အပင်များနှင့်သော်လည်းကောင်း ချိတ်ဆက် သတိပေးနိုင်ကြသည်။
အပင်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးသည် အပင်စားသတ္တဝါတို့၏ တိုက်ခိုက်စားသောက်ခြင်းခံရပါက ခုခံကာကွယ်ရေးယန္တရားများ အသက်ဝင်လာပြီး ဟန့်တားခြင်း၊ တွန်းလှန်းခြင်းများကို
ထို့အပြင် တခြားသော အပင်များကိုလည်း ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ အသင့်ပြင်ထားရန်
အသိပေးနိုင်သည်ဟု Ecologist ပညာရှင်တို့က ပြောဆိုကြသည်။ အပင်မျိုးစိတ် တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုး ဆက်သွယ်ရန် အမြစ်များကတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ကြပြီးအမြစ် များ၏ ကြားခံနယ်တွင် Arbuscular Mycorrhizal Fungal(AMF) မှိုများက ကွန်ယက်သဖွယ် ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်သည်ဟု သိရှိရသည်။အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များသည်
အလွန်ရှုပ်ထွေးနေပြီး ကျယ်ပြန့်နက်နဲသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်
အားလုံး၏ ဘုံတူညီချက်မှာ သတ္တလောကအတွင်းအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
အပင်တို့က အပင်စားသတ္တဝါများကိုခုခံကာကွယ်ခြင်းစနစ်များ –
ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်တွင် အမြဲတမ်း(သို့မဟုတ်) ပြင်ပခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ( Constitutive Defense System) နှင့် အတွင်း ခုခံကာကွယ်ရေး စနစ်များ( Inductive Defense System ) ဟူ၍
နည်းလမ်း ၂ သွယ်ရှိသည်။ အပင်တို့၏ ပြင်ပ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်သည် အမြဲတမ်း အသင့်ဖြစ်သော ပုံစံမျိုးဖြစ်၍ အတွင်း ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များသည် သာမန်အခြေအနေတွင် နိုးထခြင်းမရှိဘဲ
အပင်သို့ တစ်ခုခုသောဖိစီးမှု သက်ရောက်လာမှသာ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ နိုးကြွလာသော
ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။ အပင်တွင်း ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များကို အပင်ဟော်မုန်းများ ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပြင်ပခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ ( Constitutive Defense System ) –
ပြင်ပခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များသည် ကာကွယ်ရန် အမြဲတမ်းအသင့်ဖြစ်နေသော ပုံစံမျိုးဖြစ်၍
ယေဘုယျအားဖြင့် သစ်ခေါက်(Tree bark)၊ ဆူးများ(Spines)၊ အမွှေးများ(Trichome)နှင့်
ဖယောင်းလွှာ(Cuticle) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံကာကွယ်ခြင်း
စနစ်များ( Physical defenses ) ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ပြင်ပခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ( Constitutive Defense System ) သည် အပင်တို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်္ဂါအသီးသီးမှ ထူးကဲစွာဖြစ်ပေါ်လာသော ပြင်ပ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။
အခေါက်တို့ဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း( Defences System of Bark ) –
သစ်ပင်များတွင် အခေါက်များရှိနေသည်ကို လူတိုင်းသိကြသည် တွေ့ဖူးမြင်ဖူးကြသည်။
သို့သော် သစ်ပင်များတွင် သစ်ခေါက်များ ရှိနေရခြင်း၏ အခြေခံသဘောတရားများကို
သိရှိသူတို့မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သစ်ခေါက်(Bark)တို့သည် အပင်မျိုးစိတ်အလိုက် မတူကွဲပြားနေသကဲ့သို့ အပင်တို့တွင် သစ်ခေါက်များ ရှိနေရခြင်း၏ ရည်ရွက်ချက်တို့သည်လည်း အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေကြသည်။ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ကွဲပြားနေသော သစ်ခေါက်များ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာအလိုက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အရင်းခံအကြောင်းတရားများကို
အပင်ဝါသနာရှင်တို့ အဖြေရှာကြည့်သောအခါ အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို အဖြေရှာ
အခေါက်သည် ပင်စည်(Trunk) ၏ အပြင်ဘက်ဆုံးအင်္ဂါဖြစ်ပြီး Periderm အလွှာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော
Dead tissue များဖြစ်သည်။ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခေါ်အဝေါ်တွင် “Rhytidome.” သည် အခေါက်ကို ရည်ညွှန်းသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ အခေါက်တို့သည် မရေတွက်နိုင်သော ပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းများကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်လာသော အင်္ဂါဖြစ်သည်။ အပင်များစွာတို့၏အခေါက်သည် စထွက်ခါစတွင် ချောမွတ်နေသော်လည်း အိုသွားသည့်အခါ အစင်းကြောင်း(Ridgeds)၊ အကြေးဖက်များ ( Scaly ) နှင့် အက်ကြောင်းများ(Cracked) ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အခေါက်သည် ရေကြော(Xylem)၊ အသားတိုးလွှာ( Cambium )၊ အစာကြော( Phloem ) တို့နှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိ၍ အပင်မျိုးစိတ်အလိုက် အရောင်အမျိုးမျိုး ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုး ရှိကြသည်။ အရောင်အသွေးနှင့် အသွင်သဏ္ဌာန်များ မည်သို့ပင်ကွဲပြားစေကာမူ အခေါက်တို့၏ အဓိကတာဝန်မှာ ပြင်ပမှ သက်ရောက်လာမည့် ဖိစီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
အပင်၏ ပြင်ပအင်္ဂါဖြစ်သော အခေါက်သည် ပြင်ပဝန်းကျင်မှ သက်ရောက်လာသည့် ဖိစီးမှု( Stress ) များကို အခြားနေရာများထက် ပိုမိုခံစားရလေ့ရှိသည်။
အပင်၏ အရေပြားကဲ့သို့ဖြစ်နေသော အခေါက်သည် ပြင်ပမှ သက်ရောက်လာသော ဖိစီးမှုများကို
ချပ်ဝတ်တန်ဆာ(Armour) ကဲ့သို့ ကာကွယ်ပေးသည်။ အခေါက်တို့သည် အပင်စားသတ္တဝါများ
(Herbivorous)၊ အင်းဆက်များ(Insects)၊ မှိုများ(Fungal)၊ ဘက်တီးရီးယားများ(Bacterial)
အပါအဝင် ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိများ ( Pathogens ) ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
၎င်းအပြင် အပင်၏ အစာရေသယ်ပို့ရာ အစာကြော၊ ရေကြောများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း( Excess heat )၊ အအေးလွန်ကဲခြင်း( Excess cold )၊ ပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်( Extreme Amounts of Sunshine )နှင့် ရေငွေ့ပျံခြင်း( Evaporation ) တို့ကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။ အပင်တွေမှာ အခေါက်တွေသာမရှိခဲ့ပါက အပင်အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါသော အစာရေကြောတစ်သျှူးများ(Vascular tissues) ပျက်စီးပြီး အပင်အတွင်း ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မည့် အန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံရမည်ဖြစ်သည်။
အခေါက်ထူသော အပင်တို့သည် အစိုဓာတ်(Moisture) ထိန်ထားနိုင်စွမ်းအားကောင်းေ သာကြောင့် အပူစီးကူးခြင်းနှေးကွေးသဖြင့်မီးဒဏ်ကာကွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာ – ဂျင်ကို(Ginkgo)၊ တရုတ်စကား၊ ထနှောင်းတချို့သော အပင်တို့၏ အခေါက်များတွင်အဆိပ်ရှိ ဓာတုဗေဒ ဓာတ်ပေါင်းများ ပေါင်းစပ်ပါရှိနေသောကြောင့် ပိုးမွှားများနှင့် အပင်စားသတ္တဝါများ ကို ခုခံကာကွယ်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။အပင်တို့၏ အခေါက်များသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒါဏ်ရာအနာတရများဖြစ်ခဲ့ပါက
ကြမ်းတမ်းသော အခေါက်(Rough Bark) များက ချောမွတ်သောအခေါက်(Smooth bark) တို့ထက်
မြန်မြန်ပြန်ကောင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်။ တချို့သော အခါက်များသည် Photosynthetic
ဖြစ်စဉ်ကို အရန်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားကြသည်။
အဆူးများဖြင့်ခုခံကာကွယ်ခြင်း ( Spines and Thorns Defenses ) –
အပင်များကို ကျွဲနွားတိရိစ္ဆာန်များ( Cattle ) ပါဝင်သည့် တချို့သော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
( Mammals )နှင့် အင်းဆက်များ( Insects ) ပါဝင်သော တချို့သော အဆစ်အပိုင်းရှိသတ္တဝါများ
( Arthropods ) တို့က စားသုံးကြသည်။ အပင်စားသတ္တဝါများ( Herbivores ) ၏ စားသုံးခြင်းကို ဆန့်ကျင်ရန် အပင်တို့တွင် ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များ ပါရှိကြသည်။ အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်များတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားနည်းများ( Defense Mechanisms ) သည် အပင်စားသတ္တဝါများကို ခုခံကာကွယ်ရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိ၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော ဆူးများဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်းသည်လည်း
အပင်စားသတ္တဝါများကို ကာကွယ်ဟန့်တားရာတွင် များစွာအကျိုးရှိသော ဗျူဟာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ဆူးများသည် အပင်စားသတ္တဝါတို့၏ စားသုံးခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ရန် ထူးကဲစွာ
ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြင်ပအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ အဆူးရှိသော အပင်မျိုးစိတ်များစွာရှိ၍
အဆူးအားလုံးသည် ထူးကဲအင်္ဂါများဖြစ်သည်။ အဆူးများတွင် Modified Branches
အကိုင်းများမှ ထူးကဲလာသော ပင်စည်ဆူးများ (Thorns)၊ Modified Leaves အရွက်များမှ
ထူးကဲလာသော အရွက်ဆူး( Spines )နှင့် ဆူးမွှားများ(Prickle) ဟူ၍ အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ပုံစံအားဖြင့် – ကြိမ်ပင်တွင်တွေ့ရသော ရွက်​အိမ်​ဆူး( Leaf sheath spine )၊ ဆူးဖြူပင်( Acacia Arabica )တွင် တွေ့ရသော ရွက်စွယ်ဆူး( Stipular spine )၊ နာနက်ရွက်နားတွင် တွေ့ရသော လွှသွားပုံ ရွက်နားဆူး( Serrated spine )၊ ရှားစောင်းမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များ(Cactus) တွင်
တွေ့ရသော ဆူးရွက်များ( Leaf Spines )၊ ထနှောင်းပင်(Acacia leucophloea )တွင်
တွေ့ရသော ဆူးရွက်စွယ်များ(Spinous stipules)၊ ကုန်းခရာပင်(Argemone mexicana L.,) ၏
ရွက်နားတွင်တွေ့ရသော ရွက်နားဆူး ( Leaf margin spine )၊ ဆီးသီးပင်တွင်တွေ့ရသော ချိတ်သဏ္ဌာန် ရွက်စွယ်ဆူးများ(Stipule spines)၊ လက်ပံပင်တို့၏ ပင်စည်အကိုင်းအခက်များတွင်
တွေ့ရသော ပင်စည်ဆူးများ( Thorns ) စသဖြင့် ဆူး အမျိုးအစားများစွာရှိ၍
ဆူးများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော အပင်တို့ကိုမည်သည့်အပင်စားသတ္တဝါမဆို စားသောက်ရန်
တွန့်ဆုတ်တက်ကြမြဲဖြစ်သည်။ ဆူးများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်သည် အပင်တို့ကို
လာရောက်စားသုံးမည့် အပင်စားသတ္တဝါများကိုဒဏ်ရာအနာတရများ ရရှိစေပြီး ဟန့်တားနိုင်ရန်
ဥပမာ – နှင်းဆီပင်ရဲ့ ပင်စည်အကိုင်းအခက်များတွင်တွေ့ရသော ဆူးမွှားများ( Prickle ) သည်
အပင်ကိုစားသုံးမည့် အပင်စားသတ္တဝါများ( Herbivores )ကို ဟန့်တားထားနိုင်သည်။
ထို့အပြင် နှင်းဆီပင်၏ အရွက်သတ္တုရည် ( Tea leaves )နှင့် ဝတ်ရည်( Nectar ) တို့တွင်
ကဖင်းဓာတ်( Caffeine )များ ပါရှိနေသဖြင့် ပုရွက်ဆိတ်များကို သေစေနိုင်သည်။
ဥပမာ – Central America, တောင်ပိုင်းတွင် ပေါက်ရောက်သော အာကေးရှားအပင်တစ်မျိုး
(Acacia collinsii)၏ ဆူးများသည် အပင်စားသတ္တဝါများကို ဟန့်တားနိုင်သည့်အပြင်
ဆူးအတွင်း အခေါင်းပေါက်(Hollow) ထဲတွင် ပုရွက်ဆိတ်များကို နေထိုင်စေခြင်းဖြင့်
တချို့သော အပင်စားသတ္တဝါများကို ပုရွက်ဆိတ်တို့က ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးသည်။
ဥပမာ – Kiss me quick(Euphorbia milii) အပင်တို့၏ ဆူးများသည် အပင်စားသတ္တဝါတို့ကို
ကာကွယ်နိုင်သည့်အပြင် အပင်၌ရှိနေသော Toxicity compounds များက
ဥပမာ – ဒူးရင်းသီး(Durio zibethenus)၏ အသီးခွံပေါ်မှ ဆူးများ(Spines) သည်
အပင်စားသတ္တဝါများကို ကာကွယ်ဟန့်တားရန် ဖြစ်ပေါ်လာသော အင်္ဂါများဖြစ်သည်။
ဒူးရင်းသီးကဲ့သို့ပင် ဆူးများပါရှိသော အသီးအမျိုးအစားများစွာ ရှိနေသည်။
အပင်တို့၏ ပင်ပိုင်းအင်္ဂါများတွင် ရှိနေသောဆူးများ၏အဓိကတာဝန်မှာ အပင်စားသတ္တဝါတို့ကို
ကာကွယ်ဟန့်တားရန်ဖြစ်သော်လည်း အပူချိန်လျော့ချခြင်းနှင့် တချို့သောအပင်များတွင်
တွယ်တက်ခြင်း ကဲ့သို့သော တာဝန်တို့ကိုလည်းထမ်းဆောင်ရသည်။
လိင်ပိုင်းအင်္ဂါ သို့မဟုတ် မျိုးပွားအင်္ဂါဖြစ်သည့် အသီးများတွင် ပါရှိနေသော ဆူးများ၏
လုပ်ငန်းတာဝန်သည် အပင်စားသတ္တဝါများကို ကာကွယ်ဟန့်တားခြင်းအပြင် မျိုးဆက်ပျံ့နှံ့ခြင်း
( Seeds Dispersing ) တာဝန်ကိုလည်းဆောင်ရွက်ရသည်။
ဆူးများ(Spines)ပါရှိသော အသီးတို့သည် တိရိစ္ဆာန်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ကပ်ပါသွားပြီး
မိခင်အပင်နှင့် ဝေးရာဆီသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားသည်။ထိုကဲ့သို့ ပျံ့နှံ့ခြင်းအား Epizoochory ဟုခေါ်သည်။
ဥပမာ – ကပ်စေးနှဲကြီး( Urena lobata )၊ ကုန်းထိကရုံး( Mimosa pudica Linn.)၊ ဆေးဂဠုန်သီး( Martynia annua)၊ ဆူးလေ( Tribulus terrestris) တို့ ဖြစ်သည်။
အမွှေးများဖြင့် ခုခံကာကွယ်ခြင်း ( Defence Systems of Hairs ) –
အပင်တချို့ရဲ့ ပြင်ပအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အသီးသီးတွင် အမွှေးများ( Hairs ) ပါရှိကြသည်။
အဆိုပါ အမွှေးများကို လက်တင်ဘာသာဖြင့် “Trichome” ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် Trichome ၏ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံသည် အမွှေးများကိုသာ သီးခြားရည်ညွှန်းသည်မဟုတ်ဘဲ အမွှေးများ( Hairs )၊ ဂလင်းအမွှေးများ (Glandular hairs)၊ အကြေးဖက်များ(Scales)နှင့် အရွက်မျက်နှာပြင်တွင် တွေ့ရှိရသော အဖုအကြိတ်ငယ်လေးများ( Papillae ) လည်း ပါဝင်နေသည်။
Papillae တို့သည်လည်း အင်းဆက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် Leafgalls နှင့် မတူညီကြောင်း
သိထားရမည်။ တဖန် အမွှေးတို့တွင်လည်း ရိုးရိုးအမွှေးများနှင့် ယား​မွှေးများ(Stinging hairs) ဟူ၍ ၂ မျိုး ကွဲပြားနေသည်။
Trichomes တွေကို ဂရိဘာသာစကားဖြင့် τρίχωμα (trichōma) ဟုခေါ်ပြီး အပင်တို့၏
အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော အင်္ဂါ သို့မဟုတ် “hair” ဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
Trichomes များတွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Trichomes များ၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်သည် အပင်စားသတ္တဝါများကို
ခုခံကာကွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ တချိုသော အပင်တို့၏ ခုခံကာကွယ်ရေး
အင်္ဂါဖြစ်သော ရိုးရိုးအမွှေးများနှင့် ယားမွှေးတို့သည် သွင်ပြင်လက္ခဏာအရ ကွဲပြားမှု သိပ်မရှိသော်လည်း အပင်စားသတ္တဝါများကို ဟန့်တားနိုင်စွမ်းသည် မတူညီကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ရိုးရိုးအမွှေးများ(Hairs) ထက် ယားမွှေးများက အပင်စားသတ္တဝါများကို ဟန့်တားနိုင်စွမ်းမှာ
ရိုးရိုးအမွှေးများသည် အပင်စားသတ္တဝါ တချို့အတွက် ခုခံကာကွယ်ရေးစနစ်တွင်
ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း အင်းဆက်များအတွက် ထိရောက်မှုမရှိချေ။
ယားမွှေး(Stinging hairs) ဟု ခေါ်သော ယားယံစေတက်သော အမွှေးများသည်
အပင်စားသတ္တဝါများအပြင် အင်းဆက်များကိုလည်း ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ယားမွှေးများကို မတော်တဆထိမိခဲ့သော် သတ္တဝါတို့၏ အရေပြားအတွင်းသို့ အလွယ်တကူ
တိုးဝင်နိုင်ပြီး နာကျင်ကျိန်းစပ်ခြင်းနှင့် ယားယံခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိတွေ့မိပါက ယားယံစေတက်သော အမွှေးများပါရှိသည့် အပင်မျိုးစိတ်အများအပြား
ရှိသော်လည်း လူသိအများဆုံးနှင့် အထင်ရှားဆုံးအပင်မှာ “True nettles” ဟုခေါ်သော
ဖက်ယားပင်(Laportea interrupta) ဖြစ်သည်။
ဖက်ယားပင်(Laportea interrupta) ဖက်ယားပင်သည် Urticaceae မျိုးရင်းတွင်
ပါဝင်ပြီး ယားမွှေးများ(Stinging hairs)ပါရှိသော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
မတော်တဆထိမိပါက အရေပြားကို ယားယံစေတက်သည်။
ယားယံစေတက်သော အမွှေးများကို ခိုင်မာသောအခြေက ထောက်ကူပေးထားပြီး
အဖျားသည် ကြွပ်ဆပ်ကာကျိုးလွယ်သည်။ ယားမွှေး၏ အဖျားပိုင်းသည် အရေပြားအတွင်း
ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး အဆိပ်ရည်များ ရောက်ရှိသွားစေသည်။
အတိအကျဆိုရပါက ၎င်းယားမွှေးများတွင် ဓာတုအဆိပ်တစ်မျိုးဖြစ်သော Histamine ,
အင်းဆက်တွေကို ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေသော Acetylcholine အဆိပ်နှင့် Formic acid တို့
ပါရှိနေသည်။ ထို့အပြင် ယားယံစေသည့် လက်တလောဝေတနာကို ခံစားရမှု သိသာစေသော Serotonin ဓာတုဗေဒပစ္စည်းဒြပ်ပါင်းများလည်း ပေါင်းစပ် ပါရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အရေပြားကိုထိမိပါက ပြင်းထန်စွာယားယံစေပြီး အပင်စားသတ္တဝါများ စားသုံးခြင်းမရှိကြချေ။
Urticaceae မျိုးရင်းထဲမှ အပင်အားလုံးသည် ယားယံစေတက်သော အပင်များမဟုတ်ဘဲ
Laportea မျိုးစုဝင် အပင်တချို့သာ ယားယံစေတက်သည်။
၎င်း မျိုးရင်းထဲမှ “Urtica dioica L.” မျိုးစိတ်ကိုဟင်းရွက်အဖြစ် စားသုံးနိုင်ပြီး ဆေးဝါးနှင့်
ချည်မျှင်များထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။Laportea မျိုးစုထဲမှ ယားယံစေတက်သော
အပင်များနှင့် အခြားမျိုးစုထဲမှ အပင်တို့သည်အမွှေးရှိတာခြင်း တူညီနေသော်လည်း
ဓာတုဒြပ်ပေါင်းပါဝင်မှု ကွာခြားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Urticaceae မျိုးရင်းဝင်
အပင်အားလုံးနီးပါးတွင် အမွှေးများပါရှိကြပြီး ယားယံစေတက်သော ယားမွှေးများမဟုတ်ပါ။
အမွှေးရှိတဲ့ အပင်တွေကတော့ တချို့သော အပင်စားသတ္တဝါများ မစားသုံးနိုင်အောင်
ဟန့်တားနိုင်သော်လည်း အင်းဆက်တွေအတွက်တော့ ထိရောက်မှုမရှိချေ။
ဖက်ယားပင်ကဲ့သို့ပင် ထိမိပါက ယားယံတက်သောအပင်များစွာကို တွေ့မြင်ဖူးသည်။
အပင် တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး အသွင်သဏ္ဌာန်မတူညီသော်လည်း တူညီမှုတစ်ခုမှာ
အမည်ဖြစ်၍ ယားယံတက်သော အပင်ဟူသမျှကို”ဖက်ယားပင်” လို့သာ အမည်ပေးထားကြသည်။
လေ့လာကြည့်ပါက ဖက်ယားပင်ဟု ခေါ်စေကာမူအပင်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရမည်။
ထို့ကြောင့်ပင် ဖက်ယားပင်များအကြောင်း သိလို၍လေ့လာကြည့်ရာ ဖက်ယားကြီး၊ ဖက်ယားငယ်၊
နွယ်ဖက်ယား၊ ဆင်ဖက်ယား၊ ကြက်ဖက်ယား၊တောဖက်ယား၊ တောင်ဖက်ယား စသဖြင့်
အပင်ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေသည်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရှိရသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဖက်ယားပင်များအကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ယခု ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်
ရေးသားဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း အချက်အလက် အကိုးအကား မပြည့်စုံ၍
ယားယံစေတက်သော အပင်များတွင် ထင်ရှားလူသိများသော နောက်ထက်အပင်တစ်မျိုးမှာ
ခွေးလှေးယားပင်(Mucuna pruriens) ဖြစ်သည်။ ခွေးလှေးယားပင်ကို မြန်မာပြည်နေရာအနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရှိရပြီး ယားယံစေတက်သည့် အပင်တစ်မျိုး
ဖြစ်သောကြောင့် လူတိုင်းနီးပါးသိကြသည်။ ခွေးလှေးယားပင်၏ အဓိက ယားယံစေတက်သော
အစိတ်အပိုင်းမှာ အသီးတောင့်ဖြစ်သည်။ အသီးတောင့်(Seed pods) အပေါ်ယံရှိ
ယားမွှေးများကို ထိမိပါက အရေပြားပေါ်တွင် အလွန်ယားယံသော ဝေတနာကို ခံစားရသည်။
၎င်း ယားမွှေးများတွင် Mucunain နှင့် Serotonin အမည်ရှိသော ဓာတ်ပစ္စည်းနှစ်မျိုး ပါဝင်နေသဖြင့်
ထိတွေ့မိသည့်နေရာကို ယားယံစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အပင်စားသတ္တဝါတို့၏
စားသုံးခံရမည့် ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေသည်။
ယားယံစေတက်သော အပင်များစွာရှိပြီး ဝါးမျိုးနွယ်များတွင် ယားယံစေတက်သည့်
ယားမွှေးများပါရှိကြပြီး အရေပြားနှင့် ထိမိပါက ယားယံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ပင် ကောက်ရိုးမှော်၊ ပဲမှော်(ပဲပုပ်၊ မတ်ပဲ)၊ ကိုင်းမြက်၊ သက်ငယ် အစရှိသည့်
အပင်တို့သည်လည်း အရေပြားနှင့် ထိမိပါက ယားယံခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယားယံစေတက်သော အပင်အားလုံကို ခြုံငုံ၍ယားယံစေတက်သောအပင်များ
( Itchy-rash plants) ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ယားယံစေတက်သော ယားမွှေးများအကြောင်း အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ယားယံမှု
မဖြစ်သော အမွှေးများအကြောင်း အနည်းငယ် ရေးသားဖော်ပြပါမည်။
ယားယံမှုမဖြစ်နိုင်သည့် အမွှေးတို့သည် ယားယံခြင်းမရှိစေကာမူ အမွှေးထူသော
အပင်များဖြစ်နေပါက အပင်စားသတ္တဝါတို့က စားသုံးခြင်း မပြုကြပါ။
ယားယံခြင်းမရှိသည့် အမွှေးတို့၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် ယားယံစေသော
ယားမွှေးများနှင့် ဆင်သော်လည်း မာကြောတောင့်တင်းခြင်း မရှိသဖြင့်
အရေပြားအတွင်းသို့ အလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်ပါ။ အရေပြားအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်စေကာမူ အဆိပ်ဓာတ်ပေါင်းများ မပါရှိသောကြောင့် ယားယံခြင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
တချို့သော Cactus မျိုးနွယ်ဝင် အပင်များတွင် ဆူး သို့မဟုတ် အမွှေးများကို တွေ့ရှိရပြီး
အရေပြားအတွင်း စူးဝင်ခဲ့သော် နာကျင်မှု ဝေတနာကိုသာ ခံစားရပြီး ယားယံခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။
ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသည် အမွှေးများတွင် အဆိပ်ဓာတ်ပေါင်းများ မပါဝင်၍ ဖြစ်သည်။
ဥပမာ – ဆင်နှာမောင်းပင်(Heliotropium indicum) တောက်တဲ့လက်ဝါး(Coldenia procumbens L,.) ခရမ်းချဉ်( Tomato ) အစရှိသည့် အပင်များတွင် တွေ့ရှိရသော အမွှေးများဖြစ်သည်။
အမွှေးများသည် ယားယံသည်ဖြစ်စေ၊ ယားယံမှုမရှိသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်မှာ အပင်စားသတ္တဝါများကိုခုခံကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အမွှေးများသည် ခုခံကာကွယ်ရေးအတွက် သီးခြားတည်ရှိနေသည်မဟုတ်ဘဲ အခြားသော
ဥပမာဆိုရသော် သဲကန္တာရတွင်​ပေါက်​​သော အပင်​တချို့နှင့်​ သစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင်
ကပ်ပေါက်သော သစ်ကပ်ပင်(Epiphytes)တို့၏ အရွက်​များ​ပေါ်တွင် အ​မွှေးများပါရှိနေပြီး
၎င်း အမွှေးများသည် လေထုထဲမှ ရေခိုးရေငွေ့များကို တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်ကြသည်။
ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ဒေသများတွင် ပေါက်ရောက်သော အပင်တို့သည် ၎င်းတို့အတွက်
လိုအပ်သော ရေဓာတ်ကို အမွှေးများ၏ အကူအညီဖြင့် လေထုထဲမှ တိုက်ရိုက်ရယူ၍
အသက်ရှင်သန်ရသည်။ ရေစုပ်ယူသည့် တာဝန်ကို အမြစ်တို့ကသာ ထမ်းဆောင်နေသည်မဟုတ်ပဲ အမွှေးတို့ကလည်း ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရသည်။ Carnivorous plants ဟု ခေါ်သော
အသားစားပင်များတွင်ပါရှိသော အမွှေးများသည်သားကောင်ဖမ်းရာတွင် အထောက်အကူများစွာ
ရရှိစေသည်။ ထို့အပြင် အမွှေးတို့သည် မျိုးဆက်ပျံ့နှံ့ရာတွင်လည်း အကူအညီရရှိစေသည်။
အပင်တို့၏ ပင်ပိုင်းအင်္ဂါများမှ အမွှေးတို့သည် ခုခံကာကွယ်ရေးရန် အဓိကဖြစ်သော်လည်း
အသီးနှင့် အစေ့များမှ အမွှေးတို့သည် မျိုးပျံ့နှံ့ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး အစေ့ခွံတို့မှ ထူးကဲစွာဖြစ်လာသော အမွှေးတို့သည် အစေ့အား လေနှင့်အတူ အလွယ်တကူလွင့်ပါ၍ မိခင်အပင်နှင့် ဝေးရာအရပ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ထိုကဲ့သို့ အသီးနှင့် အစေ့များ လေအကူအညီဖြင့်
ပျံ့နှံ့ခြင်းကို(Seeds dispersal by Wind ) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသည်။
ဥပမာ – မုရိုးစေးပင်( Calotropis procera )၊ လက်ထုတ်ကြီး(Holarrhena antidysenterica)၊
ဒုဓလီပန်း(ခြ​င်္သေ့သွား)Dandelion(Lion´s tooth)၊ ဗိစပ်ပင်( Eupatorium odoratum L. )၊
လက်ပံခါး( Alstonia scholaris )၊ ကောက်ရိုးနွယ်(Oxystelma esculentum)၊
ခွာညိုကြီး(Clematis smilacifolia Wall.) နှင့် ဆက်ချိုရစ်(Naravelia zeylanica) တို့ ဖြစ်သည်။
အပငျတို့ ၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား( The Plant of Defence Systems )
အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားအကွောငျး မရေးသားမီ ဖိစီးမှုမြားကို ဦးစှာဖျောပွပါမညျ။
“Stress” ဖိစီးမှုမြားကို သကျမဲ့ကွောငျ့ဖွဈရသော အဇီဝဖိစီးမှုမြား(Abiotic Stress)နှငျ့
သကျရှိမြားကွောငျ့ ဖွဈရသော ဇီဝဖိစီးမှုမြား(Biotic Stress) ဟူ၍ ၂ မြိုး
သကျမဲ့ကွောငျ့ဖွဈရသော အဇီဝဖိစီးမှုမြား(Abiotic Stress) –
– အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျး(Hight temperature)
– အပူခြိနျနိမျ့ကခြွငျး( Low temperature )
– ရဝေပျခွငျး(Water Logging)
– လပွေငျးတိုကျခကျခံရခွငျး( Wind )
– မိုးခေါငျခွငျး( Drought )
– စိုထိုငျးစလြော့နညျးခွငျး( Low Humidity )
– အလငျးရောငျမလုံလောကျခွငျး(Low sunlight)
– သတ်တုအဆိပျသငျ့ခွငျး(Heavy Metal Toxicity)
– ပွောငျးရှစေို့ကျပြိုးခွငျး( Transplanting )
– ဆားငံရညျဒဏျ( Salinity )
သကျရှိကွောငျ့ဖွဈရသော ဇီဝဖိစီးမှုမြား(Biotic Stress) –
– အပငျစားသတ်တဝါမြား( Herbivorous )
– ပိုးမှားရောဂါမြား( Pests )
– ဘကျတီးရီးယားမြား( Bacteria )
– မွသေနျကောငျမြား( Nematodes )
– မှိုမြား( Fungs )
– ဗိုငျးရပျဈမြား( Virus )
အထကျဖျောပွပါ ဖိစီးမှုတဈခုခုသညျ အပငျတို့အပျေါ သကျရောကျခွငျးကွောငျ့ အပငျတို့တှငျ ခုခံကာကှယျနိုငျသောစနဈမြား ဖွဈပျေါလာသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဖိစီးမှုတဈခုခု၏ သကျရောကျမှုဒဏျကို
ခုခံကာကှယျရနျ (သို့) လြော့ခရြနျ ဖွဈပျေါလာသညျ့ စနဈမြားကို ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား( Defence
System ) ဟု ချေါသညျ။
ခုခံကာကှယျရေးစနဈတို့သညျ သကျရောကျလာသညျ့ ဖိစီးမှုအမြိုးအစားအပျေါ မူတညျ၍ တုံ့ပွနျမှုနှငျ့
ခုခံကာကှယျမှုပုံစံတို့သညျ အမြိုးမြိုးကှဲပွားနပွေီး အပငျမြိုးစိတျအပျေါမူတညျ၍လညျး
ဥပမာ – အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျးကို ခုခံကာကှယျခွငျး
ရာသီဥတုကောငျးမှနျသော ပုံမှနျအခွအေနတှေငျ အရှကျမြား၏ မကျြနှာပွငျတှငျရှိနသေော
လပေေါကျမြား(Stomata) ၏ ဖှငျ့ခွငျး/ပိတျခွငျး ဖွဈစဉျသညျ နရီစညျးခကျြမြားအတိုငျး
ပုံမှနျလညျပတျနသေညျ။ သို့သျော လပေေါကျမြားပှငျ့နခြေိနျတှငျ အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျးကဲ့သို့ ဖိစီးမှု(Stress) သကျရောကျလာပါက ပှငျ့နသေညျ့ လပေေါကျမြားကို ပိတျပဈလိုကျပွီး ပုံမှနျလညျပတျနသေညျ့ နရီစညျးခကျြ( Circadian Rhythms ) ကို ပွောငျးလဲလိုကျကွသညျ။
ပုံမှနျအခွအေနတှေငျ လပေေါကျမြားပှငျ့နခွေငျးသညျ အပငျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးရေးအတှကျ လိုအပျသညျ့
ဓာတျငှလေဲ့လှယျခွငျး(Exchange of gases)၊ ပငျရညျငှပြေံ့ခွငျး( Transpiration ) ကဲ့သို့သော
အပငျ ဇီဝကမ်မဆိုငျရာ လုပျဆောငျခကျြမြားကို ဆောငျရှကျနိုငျရနျဖွဈသျောလညျး
လပေေါကျမြား(Stomata) ပှငျ့နခြေိနျတှငျ အပငျအတှငျး ပငျရညျငှပြေံ့ခွငျး(Transpiration)
ဖွဈစဉျကွောငျ့ ရပြေောကျဆုံးခွငျးဖွဈပျေါစသေညျ။ ပုံမှနျအခွအေနထေကျ အပူခြိနျမွငျ့မားနခြေိနျတှငျ Transpiration နှုနျးသညျ မွငျ့မားသောကွောငျ့ အပငျအတှငျး ရပြေောကျဆုံးခွငျးနှုနျးသညျလညျး
အလှနျလငျြမွနျသညျ။ အပူခြိနျမွငျ့မားနခြေိနျတှငျ Transpiration နှုနျး မွငျ့မားခွငျးသညျ အပငျတှငျး ရဓောတျခနျးခွောကျ၍ အပငျညှိုးခွငျး(Plant Wilting) ဖွဈစနေိုငျသညျ။
ဆိုလိုသညျမှာ အပူခြိနျမွငျ့မားနခြေိနျတှငျ လပေေါကျမြား(Stomata) ပှငျ့နခွေငျးသညျ
အပငျအတှငျး ပငျရညျငှပြေံ့ခွငျး(Transpiration)ကို မွငျ့မားစသေဖွငျ့ အပငျတို့ အသကျရှငျရပျ တညျနိုငျရနျ အခကျအခဲဖွဈစသေညျ။
အပူခြိနျမွငျ့မားနခြေိနျတှငျ Transpiration ဖွဈစဉျကွောငျ့ ရဓောတျခနျးခွောကျခွငျးမဖွဈစရေနျ
လပေေါကျမြား(Stomata)ကို ပိတျပဈ၍ Transpiration နှုနျးကို ထိနျးခြုပျလိုကျခွငျးသညျ
အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျးကို ခုခံကာကှယျခွငျးဖွဈသညျ။ အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျးကို ခုခံကာကှယျနိုငျရနျ
လပေေါကျမြား(Stomata) ပိတျပဈခွငျးအပွငျ အရှကျလိပျခွငျး( Leaf rolling )၊ အရှကျမြားကို
ခြှခေပြဈခွငျး စသညျ့ လက်ခဏာတို့ကိုလညျး အပငျတခြို့တှငျ တှရေ့လရှေိ့သညျ။
အရှကျလိပျခွငျး( Leaf rolling ) လက်ခဏာကို ခရမျးခဉျြပငျ၊ ပွောငျးပငျနှငျ့ ညောငျပငျအရှကျမြားတှငျ အမြားဆုံးတှရှေိ့ရသညျ။ အရှကျလိပျခွငျးသညျ အပငျအတှငျး ရဓောတျမြား လြော့နညျးလာ၍ ပွနျ့တငျးအား(Turgor pressure) လြော့ကသြှားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ တခြို့သောသူတို့က ညောငျရှကျမြား အရှကျလိပျခွငျးအား ညောငျရှကျကနျတော့ထိုးခွငျးဟု ပွောဆိုကွပွီး ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျအား ပူဇျောကနျတော့ခွငျး ဖွဈသညျဟူ၍လညျး ယုံကွညျနကွေသညျ။
အမှနျစငျစဈ ညောငျရှကျကနျတော့ထိုးခွငျးအား သိပ်ပံနညျးကြ အဖွရှောကွညျ့သညျ့အခါ
အပငျအတှငျး ရဓောတျလြော့နညျးနခြေိနျ ပတျဝနျးကငျြတှငျ အပူခြိနျမွငျ့မားသညျ့အခါ
ရဓောတျဆုံးရှုံးမှုသကျသာစရေနျ သဘာဝအရ အရှကျမြားကို လိပျပွဈခွငျးသညျ။
တနညျးဆိုရသျော အပငျအတှငျး ရဓောတျနညျးလာ၍ ပွနျ့တငျးအား(Turgor pressure) လြော့ကသြှားခွငျး ဖွဈပွီး အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျးကို ခုခံကာကှယျခွငျးလညျး
တခြို့သော ရှကျကွှပေငျမြားတှငျ အပငျအတှငျး ရဓောတျလြော့နညျးခြိနျ ပတျဝနျးကငျြ၌
အပူခြိနျမွငျ့မားလာပါက အပငျပျေါရှိ အရှကျမြားကို ခြှခေလြရှေိ့သညျ။ လပေေါကျမြားပိတျပဈခွငျး၊ အရှကျလိပျခွငျး၊ အရှကျမြားခြှခေပြဈခွငျး ဖွဈစဉျတို့သညျ အပငျတို့တှငျ သဘာဝအလြောကျဖွဈပျေါ သညျ့ အပူခြိနျမွငျ့မားခွငျးကို ခုခံကာကှယျနသေော
အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားအကွောငျး –
အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈဆိုသညျမှာ ဖိစီးမှုအမြိုးမြိုး၏ သကျရောကျမှုဒဏျကို
ခုခံကာကှယျရနျ ဖွဈပျေါလာသောစနဈမြားကို ခုခံကာကှယျစနဈမြားအဖွဈ အကွမျးဖငျြး
သိရှိပွီးနောကျ ဖိစီးမှုအမြိုးမြိုးမှ အပငျစားသတ်တဝါမြား(Herbivorous)ကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသော ခု ခံကာကှယျရေးစနဈမြား အကွောငျးကိုသာ ယခုစာစုတှငျ အဓိကထား ရေးသားသှားမညျဖွဈ၍ တခွားသော ဖိစီးမှုမြားကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသော ခုခံကာကှယျရေး စနဈမြားအကွောငျးကို နောကျပိုငျး အလဉျြးသငျ့ပါက သီးခွား ရေးသားဖျောပွပေးပါမညျ။
ကြှနျုပျတို့ နထေိုငျရာ ဤကမ်ဘာကွီးသညျ သကျရှိမြားနှငျ့ လှမျးခွုံထားသော သကျရှိကမ်ဘာ
( Living Planet ) တဈခုဖွဈသညျ။ သိပ်ပံပညာရှငျမြား၏ အဆိုအရ စကွဝဠာအတှငျး
ဂွိုလျကမ်ဘာဟုလညျး ဆိုကွသညျ။ သကျရှိကမ်ဘာတှငျ နထေိုငျကွသော သကျရှိမြား
ရှငျသနျရနျတညျနိုငျရနျ မရှိမဖွဈအရေးကွီးသော ရငျးမွဈမြားတှငျ အစားအစာသညျလညျး
တဈခုအပါအဝငျဖွဈနသေညျ။ အစားအစာအတှကျ သကျရှိအခငျြးခငျြး
အပွနျပွနျအလှနျလှနျ မှီခိုနရေသညျ့ ဖွဈစဉျကို အစာကှငျးဆကျ( Food chains ) ဟု ချေါသညျ။
အပငျတို့သညျ နရေောငျခွညျစှမျးအငျဖွငျ့ ကိုယျပိုငျအစာခကျြလုပျနိုငျကွသညျ။
၎င်းငျးဖွဈစဉျကို အလငျးမှီအစာစုဖှဲ့ခွငျးဖွဈစဉျ ( Photosynthesis ) ဖွဈစဉျဟု ချေါတှငျပွီး
ဓာတုဖွဈစဉျမြားတှငျ အခွခေံအကဆြုံးနှငျ့ ကွီးကယျြခနျးနားဆုံး Phenomenon
ဖွဈသညျဟုဆိုရသျော လှနျမညျမထငျပါ။ အပငျတို့သညျ Photosynthesis ဖွဈစဉျမှ
ရရှိလာသော စှမျးအငျမြားကို ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးအတှကျ အသုံးပွုရသညျ။ Photosynthesis ဖွဈစဉျ မှ အစပွု၍ ဖွဈပျေါလာသော အပငျတဈသြှူးမြားကို အပငျစားသတ်တဝါတို့က စားသုံးကွရသညျ။
ဤသညျမှာ အစာကှငျးဆကျ(Food chains) ၏ ကနဦးအစဖွဈသညျ။
အစာကှငျးဆကျ၏ အစဖွဈသော အပငျတို့ကို ထုတျလုပျသူ(Producer) ဟု ချေါဆို၍
အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ပထမစားသုံးသူ (Primary consumers) သို့မဟုတျ အပငျစားသတ်တဝါမြား(Herbivorous)ဟုချေါသညျ။
အပငျစားသတ်တဝါမြားတှငျ နှံကောငျ၊ ပြား၊ ရှဉျ့၊ ယုနျနှငျ့ သမငျမြားအပါအဝငျ အပငျတို့ကိုသာ စားသုံးသညျ့ အပငျစားသတ်တဝါမြားဖွဈ၍ အဆိုပါ အပငျစားသတ်တဝါမြားကို စားသုံးကွသညျ့
သတ်တဝါမြားကို အသားစားသတ်တဝါမြား ( Carnivorous ) သို့မဟုတျ ဒုတိယစားသုံးသူမြား
( Secondary consumers )ဟု ချေါသညျ။ အသားစားသတ်တဝါမြားတှငျ မွှေ၊ ဖား၊ ကွောငျနှငျ့
ပုတျသငျမြားအပါဝငျ အသားစားသတ်တဝါငယျမြားကို စားသုံးကွသညျ့ အသားစားသတ်တဝါကွီးမြား
သို့မဟုတျ တတိယစားသုံးသူမြားကို (Tertiary consumer) ဟု ချေါသညျ။
ဥပမာ – ဝကျဝံ၊ သိနျးငှကျ၊ ကြား၊ ငါးမနျး ထိုမှတဖနျ အပငျမြား၊ သတ်တဝါမြား သဆေုံးခဲ့သျော
၎င်းငျးတို့ကို စားသုံးသညျ့ မှိုမြားနှငျ့ ဘကျတီးရီးယားမြားကို ခဖြေကျြသူမြား( Decomposers )ဟု ချေါသညျ။
ခွှငျးခကျြအဖွဈ မသဆေုံးသေးသော သကျရှိတို့၏ ကိုယျပျေါတှငျ Decomposers မြားကို တှရေ့သညျ။
ထိုမှ တဆငျ့ပွီး တဆငျ့ စားသောကျခဲ့ရာ နောကျဆုံးတှငျ အပငျမြား ပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျသညျ့
အာဟာရမြား( Nutrients ) အဖွဈသို့ ရောကျရှိသှားကွသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ သကျရှိအခငျြးခငျြး စားသောကျကွသညျ့ ဖွဈစဉျတဈခုလုံးကို ခွုံငုံ၍ အစာကှငျးစကျ
( Food chains ) ဟု ချေါဆိုသညျ။
အစာကှငျးစကျအကွောငျး အကွမျးဖငျြးသိရှိပွီးနောကျ အပငျတို့၏ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားအကွောငျး
ဆကျလကျဖျောပွပေးပါမညျ။အထကျတှငျ ဖျောပွခဲ့သော အစာကှငျးဆကျ၏ အခွခေံအုတျမွဈတှငျ အပငျစားသတ်တဝါတို့က အပငျတို့ကိုစားသုံးကွောငျးသိနိုငျသညျ။
တဈနရောမှ တဈနရောသို့ ရှလြေ့ားမှုမပွုနိုငျသညျ့ အစားခံ အပငျမြားကို အပငျစားသတ်တဝါမြား
အလှနျအကြှံ စားသုံးမှုမပွုနိုငျရနျ ဟနျ့တားခွငျး၊ တှနျးလှနျခွငျး၊ ကာကှယျခွငျး စနဈမြားကို ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား သို့မဟုတျ ကာကှယျရေးယန်တရားမြားဟု သကျမှတျသညျ။
ခုခံကာကှယျရေးယန်တရားသညျ အပငျတို့၏ တဈသြှူးမြား( ပငျစညျ၊ အရှကျ၊ အမွဈမြားနှငျ့ မြိုးပှားအင်ျဂါမြား ) ကို အပငျစားသတ်တဝါမြား အလှနျအကြှံ
စားသုံးခွငျးကွောငျ့ သတ်တလောကအတှငျး တဈဖကျစောငျးနငျးမဖွဈရအောငျ သဘာဝတရားက အမွဲပဲ့ကိုငျပေးထားသော သဘာဝဖွဈစဉျဖွဈသညျ။ ခုခံကာကှယျရေး ဆငျ့ကဲဖွဈစဉျ( Evolution )
လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၂ ဒဿမ ၅ ဘီလီယံမှ နှဈသနျး ၇၅၀ ကွား ကပျကမ်ဘာဖွဈသညျ့ ပရိုတယျရို ဇိုးရဈကပျကမ်ဘာ(Proterozoic Aeon) ကာလအတှငျး ပျေါပေါကျခဲ့သော အပငျမြားတှငျ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား မဖှံ့ဖွိုးသေးဘဲ အစားခံသကျသကျသာ ဖွဈတညျခဲ့ကွပွီး
သဘာဝ၏ ရှေးခယျြမှု(Natural selection) အရ အပငျတို့သညျ အပငျစားသတ်တဝါမြား၏
အစားခံဘဝသကျသကျမှ လှတျမွောကျနိုငျရနျ အခြိနျကာလတဈခု ဖွတျသနျးပွီး တဖွညျးဖွညျး ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲခဲ့ကွသညျ။ ဆငျ့ကဲပွောငျးလဲခဲ့သော ကာကှယျရေးစနဈမြားသညျ
အပငျစားသတ်တဝါမြား၏ စားသုံးခံရခွငျးကို ဟနျ့တား ကနျ့သတျရာတှငျ ထိရောကျမှုရှိသညျ။
အပငျစားသတ်တဝါမြား၏ စားသုံးခွငျးကို ကနျ့သတျနိုငျသညျ့ အကြိုးသကျရောကျမှုမြားက
၎င်းငျးတို့ အသကျရှငျရပျတညျနိုငျရနျ သဘာဝက လိုကျလြောညီထှဖွေဈခှငျ့ပေးထားသကဲ့သို့
ကြှနျတျော လလေ့ာသိရှိထားသလောကျ အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားသညျ အပငျမြိုးစိတျအလိုကျ အမြိုးမြိုးကှဲပွားနကွေသညျ။ အပငျမြိုးစိတျ တဈမြိုးခွငျးစီတှငျ
ခုခံကာကှယျရေး စနဈ တဈမြိုးမြိုးအား ပိုငျဆိုငျထားသညျကိုတှရှေိ့ရပွီး
တခြို့သော အပငျမြိုးစိတျမြားမှာတော့ ခုခံကာကှယျရေးစနဈ တဈမြိုး သို့မဟုတျ တဈမြိုးထကျပို၍ ပိုငျဆိုငျထားတကျကွသညျ။
အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈ တဈမြိုးနှငျ့ တဈမြိုးသညျ ခြိတျဆကျနပွေီး တခြို့လညျး သီးသနျ့အသှငျဆောငျနသေညျကို တှရှေိ့ရ၏။ ထူးခွားခကျြအဖွဈ လလေ့ာတှရှေိ့ရသညျမှာ
ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားသညျ မြိုးစိတျတူ အပငျအခငျြးခငျြးသျောလညျးကောငျး၊
မြိုးစိတျမတူသော အပငျမြားနှငျ့သျောလညျးကောငျး ခြိတျဆကျ သတိပေးနိုငျကွသညျ။
အပငျမြိုးစိတျတဈမြိုးသညျ အပငျစားသတ်တဝါတို့၏ တိုကျခိုကျစားသောကျခွငျးခံရပါက ခုခံကာကှယျရေးယန်တရားမြား အသကျဝငျလာပွီး ဟနျ့တားခွငျး၊ တှနျးလှနျးခွငျးမြားကို
ထို့အပွငျ တခွားသော အပငျမြားကိုလညျး ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား အသငျ့ပွငျထားရနျ
အသိပေးနိုငျသညျဟု Ecologist ပညာရှငျတို့က ပွောဆိုကွသညျ။ အပငျမြိုးစိတျ တဈမြိုးနှငျ့ တဈမြိုး ဆကျသှယျရနျ အမွဈမြားကတဆငျ့ ဆကျသှယျနိုငျကွပွီး
အမွဈမြား၏ ကွားခံနယျတှငျ Arbuscular Mycorrhizal Fungal(AMF) မှိုမြားက ကှနျယကျသဖှယျ ခြိတျဆကျ ဆကျသှယျပေးနိုငျသညျဟု သိရှိရသညျ။အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားသညျ
အလှနျရှုပျထှေးနပွေီး ကယျြပွနျ့နကျနဲသညျ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ ခုခံကာကှယျရေးစနဈ
အားလုံး၏ ဘုံတူညီခကျြမှာ သတ်တလောကအတှငျးအသကျရှငျရပျတညျနိုငျရနျအတှကျဖွဈသညျ။
အပငျတို့က အပငျစားသတ်တဝါမြားကိုခုခံကာကှယျခွငျးစနဈမြား –
ခုခံကာကှယျရေးစနဈတှငျ အမွဲတမျး(သို့မဟုတျ) ပွငျပခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား( Constitutive
Defense System) နှငျ့ အတှငျး ခုခံကာကှယျရေး စနဈမြား( Inductive Defense System ) ဟူ၍
နညျးလမျး ၂ သှယျရှိသညျ။ အပငျတို့၏ ပွငျပ ခုခံကာကှယျရေးစနဈသညျ အမွဲတမျး အသငျ့ဖွဈသော ပုံစံမြိုးဖွဈ၍ အတှငျး ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားသညျ သာမနျအခွအေနတှေငျ နိုးထခွငျးမရှိဘဲ
အပငျသို့ တဈခုခုသောဖိစီးမှု သကျရောကျလာမှသာ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား နိုးကွှလာသော
ပုံစံမြိုးဖွဈသညျ။ အပငျတှငျး ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားကို အပငျဟျောမုနျးမြား ထိနျးခြုပျထားခွငျးဖွဈသညျ။
#ပွငျပခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား( Constitutive Defense System ) –
ပွငျပခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားသညျ ကာကှယျရနျ အမွဲတမျးအသငျ့ဖွဈနသေော ပုံစံမြိုးဖွဈ၍
ယဘေုယအြားဖွငျ့ သဈခေါကျ(Tree bark)၊ ဆူးမြား(Spines)၊ အမှေးမြား(Trichome)နှငျ့
ဖယောငျးလှာ(Cuticle) တို့ဖွဈကွသညျ။ ယငျးတို့ကို ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ခုခံကာကှယျခွငျး
စနဈမြား( Physical defenses ) ဟူ၍လညျး ချေါဆိုနိုငျသညျ။ ပွငျပခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား( Constitutive Defense System ) သညျ အပငျတို့၏ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အင်ျဂါအသီးသီးမှ ထူးကဲစှာ
ဖွဈပျေါလာသော ပွငျပအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးမြား ဖွဈသညျ။
အခေါကျတို့ဖွငျ့ ခုခံကာကှယျခွငျး( Defences System of Bark ) –
သဈပငျမြားတှငျ အခေါကျမြားရှိနသေညျကို လူတိုငျးသိကွသညျ တှဖေူ့းမွငျဖူးကွသညျ။
သို့သျော သဈပငျမြားတှငျ သဈခေါကျမြား ရှိနရေခွငျး၏ အခွခေံသဘောတရားမြားကို
သိရှိသူတို့မှာ အနညျးငယျသာရှိကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။ သဈခေါကျ(Bark)တို့သညျ အပငျမြိုးစိတျအလိုကျ မတူကှဲပွားနသေကဲ့သို့ အပငျတို့တှငျ သဈခေါကျမြား ရှိနရေခွငျး၏ ရညျရှကျခကျြတို့သညျလညျး အမြိုးမြိုး ကှဲပွားနကွေသညျ။ အမြိုးမြိုးအဖုံဖုံ ကှဲပွားနသေော သဈခေါကျမြား၏ သှငျပွငျလက်ခဏာအလိုကျ ဖွဈနိုငျခွရှေိသညျ့ အရငျးခံအကွောငျးတရားမြားကို
အပငျဝါသနာရှငျတို့ အဖွရှောကွညျ့သောအခါ အငျမတနျခကျခဲတဲ့ ပုစ်ဆာတဈပုဒျကို အဖွရှော
အခေါကျသညျ ပငျစညျ(Trunk) ၏ အပွငျဘကျဆုံးအင်ျဂါဖွဈပွီး Periderm အလှာမှ ဖွဈပျေါလာသော
Dead tissue မြားဖွဈသညျ။ပညာရပျဆိုငျရာ အချေါအဝျေါတှငျ “Rhytidome.” သညျ အခေါကျကို ရညျညှနျးသော စကားလုံးဖွဈသညျ။ အခေါကျတို့သညျ မရတှေကျနိုငျသော ပါတျဝနျးကငျြဆိုငျရာ အကွောငျးမြားကွောငျ့ ဆငျ့ကဲဖွဈပျေါလာသော အင်ျဂါဖွဈသညျ။ အပငျမြားစှာတို့၏အခေါကျသညျ စထှကျခါစတှငျ ခြောမှတျနသေျောလညျး အိုသှားသညျ့အခါ အစငျးကွောငျး(Ridgeds)၊ အကွေးဖကျမြား ( Scaly ) နှငျ့ အကျကွောငျးမြား(Cracked) ဖွဈပျေါလာသညျ။ အခေါကျသညျ ရကွေော(Xylem)၊ အသားတိုးလှာ( Cambium )၊ အစာကွော( Phloem ) တို့နှငျ့ ကပျလကျြတညျရှိ၍ အပငျမြိုးစိတျအလိုကျ အရောငျအမြိုးမြိုး ပုံသဏ်ဌာနျအမြိုးမြိုး ရှိကွသညျ။ အရောငျအသှေးနှငျ့ အသှငျသဏ်ဌာနျမြား မညျသို့ပငျကှဲပွားစကောမူ အခေါကျတို့၏ အဓိကတာဝနျမှာ ပွငျပမှ သကျရောကျလာမညျ့ ဖိစီးမှုမြားကို ကာကှယျရနျဖွဈသညျ။
အပငျ၏ ပွငျပအင်ျဂါဖွဈသော အခေါကျသညျ ပွငျပဝနျးကငျြမှ သကျရောကျလာသညျ့ ဖိစီးမှု( Stress ) မြားကို အခွားနရောမြားထကျ ပိုမိုခံစားရလရှေိ့သညျ။
အပငျ၏ အရပွေားကဲ့သို့ဖွဈနသေော အခေါကျသညျ ပွငျပမှ သကျရောကျလာသော ဖိစီးမှုမြားကို
ခပျြဝတျတနျဆာ(Armour) ကဲ့သို့ ကာကှယျပေးသညျ။ အခေါကျတို့သညျ အပငျစားသတ်တဝါမြား
(Herbivorous)၊ အငျးဆကျမြား(Insects)၊ မှိုမြား(Fungal)၊ ဘကျတီးရီးယားမြား(Bacterial)
အပါအဝငျ ရောဂါဖွဈစသေောသကျရှိမြား ( Pathogens ) ကို ကာကှယျပေးနိုငျသညျ။
၎င်းငျးအပွငျ အပငျ၏ အစာရသေယျပို့ရာ အစာကွော၊ ရကွေောမြားကို ကာကှယျပေးသညျ။
အပူခြိနျလှနျကဲခွငျး( Excess heat )၊ အအေးလှနျကဲခွငျး( Excess cold )၊ ပွငျးထနျသောနရေောငျခွညျ( Extreme Amounts of Sunshine )နှငျ့ ရငှေပြေံ့ခွငျး( Evaporation ) တို့ကိုလညျးကာကှယျပေးသညျ။ အပငျတှမှော အခေါကျတှသောမရှိခဲ့ပါက အပငျအတှကျ မရှိမဖွဈအရေးပါသော အစာရကွေောတဈသြှူးမြား(Vascular tissues) ပကျြစီးပွီး အပငျအတှငျး ရဓောတျခမျးခွောကျမညျ့ အန်တရာယျနှငျ့ တှကွေုံ့ရမညျဖွဈသညျ။
အခေါကျထူသော အပငျတို့သညျ အစိုဓာတျ(Moisture) ထိနျထားနိုငျစှမျးအားကောငျးသောကွောငျ့ အပူစီးကူးခွငျးနှေးကှေးသဖွငျ့မီးဒဏျကာကှယျနိုငျသညျ။
ဥပမာ – ဂငျြကို(Ginkgo)၊ တရုတျစကား၊ ထနှောငျးတခြို့သော အပငျတို့၏ အခေါကျမြားတှငျ
အဆိပျရှိ ဓာတုဗဒေ ဓာတျပေါငျးမြား ပေါငျးစပျပါရှိနသေောကွောငျ့ ပိုးမှားမြားနှငျ့ အပငျစားသတ်တဝါမြား ကို ခုခံကာကှယျရာတှငျ ထိရောကျမှုရှိကွောငျးတှရေ့သညျ။
အပငျတို့၏ အခေါကျမြားသညျ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဒါဏျရာအနာတရမြားဖွဈခဲ့ပါက
ကွမျးတမျးသောအခေါကျ(Rough Bark) မြားက ခြောမှတျသောအခေါကျ(Smooth bark) တို့ထကျ
မွနျမွနျပွနျကောငျးနိုငျစှမျးရှိသညျ။ တခြို့သော အခါကျမြားသညျ Photosynthetic
ဖွဈစဉျကို အရနျအနဖွေငျ့ ဆောငျရှကျနိုငျရနျ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားကွသညျ။
အဆူးမြားဖွငျ့ ခုခံကာကှယျခွငျး ( Spines and Thorns Defenses ) –
အပငျမြားကို ကြှဲနှားတိရိစ်ဆာနျမြား( Cattle ) ပါဝငျသညျ့ တခြို့သော နို့တိုကျသတ်တဝါမြား
( Mammals )နှငျ့ အငျးဆကျမြား( Insects ) ပါဝငျသော တခြို့သော အဆဈအပိုငျးရှိသတ်တဝါမြား
( Arthropods ) တို့က စားသုံးကွသညျ။ အပငျစားသတ်တဝါမြား( Herbivores ) ၏ စားသုံးခွငျးကို ဆနျ့ကငျြရနျ အပငျတို့တှငျ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြား ပါရှိကွသညျ။ အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေးစနဈမြားတှငျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာယန်တရားနညျးမြား( Defense Mechanisms ) သညျ အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ခုခံကာကှယျရာတှငျ အလှနျထိရောကျမှုရှိ၍ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနညျးလမျးတဈခုဖွဈသော ဆူးမြားဖွငျ့ ခုခံကာကှယျခွငျးသညျလညျး
အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ကာကှယျဟနျ့တားရာတှငျ မြားစှာအကြိုးရှိသော ဗြူဟာတဈမြိုးဖွဈသညျ။
ဆူးမြားသညျ အပငျစားသတ်တဝါတို့၏ စားသုံးခွငျးကို ခုခံကာကှယျရနျ ထူးကဲစှာ
ဖွဈပျေါလာသော ပွငျပအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးမြား ဖွဈသညျ။ အဆူးရှိသော အပငျမြိုးစိတျမြားစှာရှိ၍
အဆူးအားလုံးသညျ ထူးကဲအင်ျဂါမြားဖွဈသညျ။ အဆူးမြားတှငျ Modified Branches
အကိုငျးမြားမှ ထူးကဲလာသော ပငျစညျဆူးမြား (Thorns)၊ Modified Leaves အရှကျမြားမှ
ထူးကဲလာသော အရှကျဆူး( Spines )နှငျ့ ဆူးမှားမြား(Prickle) ဟူ၍ အမြိုးမြိုးရှိသညျ။
ပုံစံအားဖွငျ့ – ကွိမျပငျတှငျတှရေ့သော ရှကျအိမျဆူး( Leaf sheath spine )၊ ဆူးဖွူပငျ( Acacia Arabica )တှငျ တှရေ့သော ရှကျစှယျဆူး( Stipular spine )၊ နာနကျရှကျနားတှငျ တှရေ့သော လှသှားပုံ ရှကျနားဆူး( Serrated spine )၊ ရှားစောငျးမြိုးနှယျဝငျအပငျမြား(Cactus) တှငျ
တှရေ့သော ဆူးရှကျမြား( Leaf Spines )၊ ထနှောငျးပငျ(Acacia leucophloea )တှငျ
တှရေ့သော ဆူးရှကျစှယျမြား(Spinous stipules)၊ ကုနျးခရာပငျ(Argemone mexicana L.,) ၏
ရှကျနားတှငျတှရေ့သော ရှကျနားဆူး ( Leaf margin spine )၊ ဆီးသီးပငျတှငျတှရေ့သော ခြိတျသဏ်ဌာနျ ရှကျစှယျဆူးမြား(Stipule spines)၊ လကျပံပငျတို့၏ ပငျစညျအကိုငျးအခကျမြားတှငျ
တှရေ့သော ပငျစညျဆူးမြား( Thorns ) စသဖွငျ့ ဆူး အမြိုးအစားမြားစှာရှိ၍
ဆူးမြားဖွငျ့ပွညျ့နှကျနသေော အပငျတို့ကိုမညျသညျ့အပငျစားသတ်တဝါမဆို စားသောကျရနျ
တှနျ့ဆုတျတကျကွမွဲဖွဈသညျ။ ဆူးမြား၏ အဓိကလုပျငနျးတာဝနျသညျ အပငျတို့ကို
လာရောကျစားသုံးမညျ့ အပငျစားသတ်တဝါမြားကိုဒဏျရာအနာတရမြား ရရှိစပွေီး ဟနျ့တားနိုငျရနျ
ဥပမာ – နှငျးဆီပငျရဲ့ ပငျစညျအကိုငျးအခကျမြားတှငျတှရေ့သော ဆူးမှားမြား( Prickle ) သညျ
အပငျကိုစားသုံးမညျ့ အပငျစားသတ်တဝါမြား( Herbivores )ကို ဟနျ့တားထားနိုငျသညျ။
ထို့အပွငျ နှငျးဆီပငျ၏ အရှကျသတ်တုရညျ ( Tea leaves )နှငျ့ ဝတျရညျ( Nectar ) တို့တှငျ
ကဖငျးဓာတျ( Caffeine )မြား ပါရှိနသေဖွငျ့ ပုရှကျဆိတျမြားကို သစေနေိုငျသညျ။
ဥပမာ – Central America, တောငျပိုငျးတှငျ ပေါကျရောကျသော အာကေးရှားအပငျတဈမြိုး
(Acacia collinsii)၏ ဆူးမြားသညျ အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ဟနျ့တားနိုငျသညျ့အပွငျ
ဆူးအတှငျး အခေါငျးပေါကျ(Hollow) ထဲတှငျ ပုရှကျဆိတျမြားကို နထေိုငျစခွေငျးဖွငျ့
တခြို့သော အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ပုရှကျဆိတျတို့က ကူညီတိုကျခိုကျပေးသညျ။
ဥပမာ – Kiss me quick(Euphorbia milii) အပငျတို့၏ ဆူးမြားသညျ အပငျစားသတ်တဝါတို့ကို
ကာကှယျနိုငျသညျ့အပွငျ အပငျ၌ရှိနသေော Toxicity compounds မြားက
ဥပမာ – ဒူးရငျးသီး(Durio zibethenus)၏ အသီးခှံပျေါမှ ဆူးမြား(Spines) သညျ
အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ကာကှယျဟနျ့တားရနျ ဖွဈပျေါလာသော အင်ျဂါမြားဖွဈသညျ။
ဒူးရငျးသီးကဲ့သို့ပငျ ဆူးမြားပါရှိသော အသီးအမြိုးအစားမြားစှာ ရှိနသေညျ။
အပငျတို့၏ ပငျပိုငျးအင်ျဂါမြားတှငျ ရှိနသေောဆူးမြား၏အဓိကတာဝနျမှာ အပငျစားသတ်တဝါတို့ကို
ကာကှယျဟနျ့တားရနျဖွဈသျောလညျး အပူခြိနျလြော့ခခြွငျးနှငျ့ တခြို့သောအပငျမြားတှငျ
တှယျတကျခွငျး ကဲ့သို့သော တာဝနျတို့ကိုလညျးထမျးဆောငျရသညျ။
လိငျပိုငျးအင်ျဂါ သို့မဟုတျ မြိုးပှားအင်ျဂါဖွဈသညျ့ အသီးမြားတှငျ ပါရှိနသေော ဆူးမြား၏
လုပျငနျးတာဝနျသညျ အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ကာကှယျဟနျ့တားခွငျးအပွငျ မြိုးဆကျပြံ့နှံ့ခွငျး
( Seeds Dispersing ) တာဝနျကိုလညျးဆောငျရှကျရသညျ။
ဆူးမြား(Spines)ပါရှိသော အသီးတို့သညျ တိရိစ်ဆာနျ၏ခန်ဓာကိုယျပျေါတှငျ ကပျပါသှားပွီး
မိခငျအပငျနှငျ့ ဝေးရာဆီသို့ ပြံ့နှံ့ရောကျရှိသှားသညျ။ထိုကဲ့သို့ ပြံ့နှံ့ခွငျးအား Epizoochory ဟုချေါသညျ။
ဥပမာ – ကပျစေးနှဲကွီး( Urena lobata )၊ ကုနျးထိကရုံး( Mimosa pudica Linn.)၊ ဆေးဂဠုနျသီး( Martynia annua)၊ ဆူးလေ( Tribulus terrestris) တို့ ဖွဈသညျ။
အမှေးမြားဖွငျ့ ခုခံကာကှယျခွငျး ( Defence Systems of Hairs ) –
အပငျတခြို့ရဲ့ ပွငျပအင်ျဂါအစိတျအပိုငျး အသီးသီးတှငျ အမှေးမြား( Hairs ) ပါရှိကွသညျ။
အဆိုပါ အမှေးမြားကို လကျတငျဘာသာဖွငျ့ “Trichome” ဟုချေါသညျ။ သို့သျော Trichome ၏ အဓိပ်ပါယျအပွညျ့အစုံသညျ အမှေးမြားကိုသာ သီးခွားရညျညှနျးသညျမဟုတျဘဲ အမှေးမြား( Hairs )၊ ဂလငျးအမှေးမြား (Glandular hairs)၊ အကွေးဖကျမြား(Scales)နှငျ့ အရှကျမကျြနှာပွငျတှငျ တှရှေိ့ရသော အဖုအကွိတျငယျလေးမြား( Papillae ) လညျး ပါဝငျနသေညျ။
Papillae တို့သညျလညျး အငျးဆကျမြားကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသညျ့ Leafgalls နှငျ့ မတူညီကွောငျး
သိထားရမညျ။ တဖနျ အမှေးတို့တှငျလညျး ရိုးရိုးအမှေးမြားနှငျ့ ယားမှေးမြား(Stinging hairs) ဟူ၍ ၂ မြိုး ကှဲပွားနသေညျ။
Trichomes တှကေို ဂရိဘာသာစကားဖွငျ့ τρίχωμα (trichōma) ဟုချေါပွီး အပငျတို့၏
အပွငျဘကျတှငျရှိသော အင်ျဂါ သို့မဟုတျ “hair” ဟု အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ဆိုထားသညျ။
Trichomes မြားတှငျ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံနှငျ့ လုပျငနျးတာဝနျမြား အမြိုးမြိုးကှဲပွားကွသညျ။
မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ Trichomes မြား၏ အဓိကလုပျငနျးတာဝနျသညျ အပငျစားသတ်တဝါမြားကို
ခုခံကာကှယျရနျအတှကျဖွဈသညျ။ တခြိုသော အပငျတို့၏ ခုခံကာကှယျရေး
အင်ျဂါဖွဈသော ရိုးရိုးအမှေးမြားနှငျ့ ယားမှေးတို့သညျ သှငျပွငျလက်ခဏာအရ ကှဲပွားမှု သိပျမရှိသျောလညျး အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ဟနျ့တားနိုငျစှမျးသညျ မတူညီကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ။
ရိုးရိုးအမှေးမြား(Hairs) ထကျ ယားမှေးမြားက အပငျစားသတ်တဝါမြားကို ဟနျ့တားနိုငျစှမျးမှာ
ရိုးရိုးအမှေးမြားသညျ အပငျစားသတ်တဝါ တခြို့အတှကျ ခုခံကာကှယျရေးစနဈတှငျ
ထိရောကျမှုရှိသျောလညျး အငျးဆကျမြားအတှကျ ထိရောကျမှုမရှိခြေ။
ယားမှေး(Stinging hairs) ဟု ချေါသော ယားယံစတေကျသော အမှေးမြားသညျ
အပငျစားသတ်တဝါမြားအပွငျ အငျးဆကျမြားကိုလညျး ခုခံကာကှယျနိုငျစှမျးရှိသညျ။
ယားမှေးမြားကို မတျောတဆထိမိခဲ့သျော သတ်တဝါတို့၏ အရပွေားအတှငျးသို့ အလှယျတကူ
တိုးဝငျနိုငျပွီး နာကငျြကြိနျးစပျခွငျးနှငျ့ ယားယံခွငျးတို့ ဖွဈစနေိုငျသညျ။ ထိတှမေိ့ပါက ယားယံစတေကျသော အမှေးမြားပါရှိသညျ့ အပငျမြိုးစိတျအမြားအပွား
ရှိသျောလညျး လူသိအမြားဆုံးနှငျ့ အထငျရှားဆုံးအပငျမှာ “True nettles” ဟုချေါသော
ဖကျယားပငျ(Laportea interrupta) ဖွဈသညျ။
ဖကျယားပငျ(Laportea interrupta) ဖကျယားပငျသညျ Urticaceae မြိုးရငျးတှငျ
ပါဝငျပွီး ယားမှေးမြား(Stinging hairs)ပါရှိသော အပငျတဈမြိုးဖွဈသညျ။
မတျောတဆထိမိပါက အရပွေားကို ယားယံစတေကျသညျ။
ယားယံစတေကျသော အမှေးမြားကို ခိုငျမာသောအခွကေ ထောကျကူပေးထားပွီး
အဖြားသညျ ကွှပျဆပျကာကြိုးလှယျသညျ။ ယားမှေး၏ အဖြားပိုငျးသညျ အရပွေားအတှငျး
ထိုးဖောကျဝငျရောကျပွီး အဆိပျရညျမြား ရောကျရှိသှားစသေညျ။
အတိအကဆြိုရပါက ၎င်းငျးယားမှေးမြားတှငျ ဓာတုအဆိပျတဈမြိုးဖွဈသော Histamine ,
အငျးဆကျတှကေို ဘေးဥပါဒျဖွဈစသေော Acetylcholine အဆိပျနှငျ့ Formic acid တို့
ပါရှိနသေညျ။ ထို့အပွငျ ယားယံစသေညျ့ လကျတလောဝတေနာကို ခံစားရမှု သိသာစသေော Serotonin ဓာတုဗဒေပစ်စညျးဒွပျပါငျးမြားလညျး ပေါငျးစပျ ပါရှိနသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ အရပွေားကိုထိမိပါက ပွငျးထနျစှာယားယံစပွေီး အပငျစားသတ်တဝါမြား စားသုံးခွငျးမရှိကွခြေ။
Urticaceae မြိုးရငျးထဲမှ အပငျအားလုံးသညျ ယားယံစတေကျသော အပငျမြားမဟုတျဘဲ
Laportea မြိုးစုဝငျ အပငျတခြို့သာ ယားယံစတေကျသညျ။
၎င်းငျး မြိုးရငျးထဲမှ “Urtica dioica L.” မြိုးစိတျကိုဟငျးရှကျအဖွဈ စားသုံးနိုငျပွီး ဆေးဝါးနှငျ့
ခညျြမြှငျမြားထုတျလုပျနိုငျကွောငျး သိရသညျ။Laportea မြိုးစုထဲမှ ယားယံစတေကျသော
အပငျမြားနှငျ့ အခွားမြိုးစုထဲမှ အပငျတို့သညျအမှေးရှိတာခွငျး တူညီနသေျောလညျး
ဓာတုဒွပျပေါငျးပါဝငျမှု ကှာခွားသညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ Urticaceae မြိုးရငျးဝငျ
အပငျအားလုံးနီးပါးတှငျ အမှေးမြားပါရှိကွပွီး ယားယံစတေကျသော ယားမှေးမြားမဟုတျပါ။
အမှေးရှိတဲ့ အပငျတှကေတော့ တခြို့သော အပငျစားသတ်တဝါမြား မစားသုံးနိုငျအောငျ
ဟနျ့တားနိုငျသျောလညျး အငျးဆကျတှအေတှကျတော့ ထိရောကျမှုမရှိခြေ။
ဖကျယားပငျကဲ့သို့ပငျ ထိမိပါက ယားယံတကျသောအပငျမြားစှာကို တှမွေ့ငျဖူးသညျ။
အပငျ တဈမြိုးနှငျ့တဈမြိုး အသှငျသဏ်ဌာနျမတူညီသျောလညျး တူညီမှုတဈခုမှာ
အမညျဖွဈ၍ ယားယံတကျသော အပငျဟူသမြှကို”ဖကျယားပငျ” လို့သာ အမညျပေးထားကွသညျ။
လလေ့ာကွညျ့ပါက ဖကျယားပငျဟု ချေါစကောမူအပငျအမြိုးမြိုးဖွဈနသေညျကို တှရှေိ့ရမညျ။
ထို့ကွောငျ့ပငျ ဖကျယားပငျမြားအကွောငျး သိလို၍လလေ့ာကွညျ့ရာ ဖကျယားကွီး၊ ဖကျယားငယျ၊
နှယျဖကျယား၊ ဆငျဖကျယား၊ ကွကျဖကျယား၊တောဖကျယား၊ တောငျဖကျယား စသဖွငျ့
အပငျပုံသဏ်ဌာနျအမြိုးမြိုး ကှဲပွားနသေညျကိုစိတျဝငျစားဖှယျ တှရှေိ့ရသညျ။
ကြှနျတေျာ့အနဖွေငျ့ ဖကျယားပငျမြားအကွောငျးလလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားကို ယခု ခေါငျးစဉျအောကျတှငျ
ရေးသားဖျောပွရနျ ရညျရှယျထားသျောလညျး အခကျြအလကျ အကိုးအကား မပွညျ့စုံ၍
ယားယံစတေကျသော အပငျမြားတှငျ ထငျရှားလူသိမြားသော နောကျထကျအပငျတဈမြိုးမှာ
ခှေးလှေးယားပငျ(Mucuna pruriens) ဖွဈသညျ။ ခှေးလှေးယားပငျကို မွနျမာပွညျနရောအနှံ့အပွားတှငျ တှရှေိ့ရပွီး ယားယံစတေကျသညျ့ အပငျတဈမြိုး
ဖွဈသောကွောငျ့ လူတိုငျးနီးပါးသိကွသညျ။ ခှေးလှေးယားပငျ၏ အဓိက ယားယံစတေကျသော
အစိတျအပိုငျးမှာ အသီးတောငျ့ဖွဈသညျ။ အသီးတောငျ့(Seed pods) အပျေါယံရှိ
ယားမှေးမြားကို ထိမိပါက အရပွေားပျေါတှငျ အလှနျယားယံသော ဝတေနာကို ခံစားရသညျ။
၎င်းငျး ယားမှေးမြားတှငျ Mucunain နှငျ့ Serotonin အမညျရှိသော ဓာတျပစ်စညျးနှဈမြိုး ပါဝငျနသေဖွငျ့
ထိတှမေိ့သညျ့နရောကို ယားယံစခွေငျးဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ပငျ အပငျစားသတ်တဝါတို့၏
စားသုံးခံရမညျ့ ဘေးအန်တရာယျမှ ကငျးဝေးစသေညျ။
ယားယံစတေကျသော အပငျမြားစှာရှိပွီး ဝါးမြိုးနှယျမြားတှငျ ယားယံစတေကျသညျ့
ယားမှေးမြားပါရှိကွပွီး အရပွေားနှငျ့ ထိမိပါက ယားယံခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျသညျ။
ယငျးကဲ့သို့ပငျ ကောကျရိုးမှျော၊ ပဲမှျော(ပဲပုပျ၊ မတျပဲ)၊ ကိုငျးမွကျ၊ သကျငယျ အစရှိသညျ့
အပငျတို့သညျလညျး အရပွေားနှငျ့ ထိမိပါက ယားယံခွငျးကိုဖွဈစနေိုငျသညျ။
ယားယံစတေကျသော အပငျအားလုံကို ခွုံငုံ၍ယားယံစတေကျသောအပငျမြား
( Itchy-rash plants) ဟု ချေါဝျေါကွသညျ။
ယားယံစတေကျသော ယားမှေးမြားအကွောငျး အကွမျးဖငျြးဖျောပွခဲ့ပွီးနောကျ ယားယံမှု
မဖွဈသော အမှေးမြားအကွောငျး အနညျးငယျ ရေးသားဖျောပွပါမညျ။
ယားယံမှုမဖွဈနိုငျသညျ့ အမှေးတို့သညျ ယားယံခွငျးမရှိစကောမူ အမှေးထူသော
အပငျမြားဖွဈနပေါက အပငျစားသတ်တဝါတို့က စားသုံးခွငျး မပွုကွပါ။
ယားယံခွငျးမရှိသညျ့ အမှေးတို့၏ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျပုံသညျ ယားယံစသေော
ယားမှေးမြားနှငျ့ ဆငျသျောလညျး မာကွောတောငျ့တငျးခွငျး မရှိသဖွငျ့
အရပွေားအတှငျးသို့ အလှယျတကူ မဝငျရောကျနိုငျပါ။ အရပွေားအတှငျးသို့ ဝငျရောကျနိုငျစကောမူ အဆိပျဓာတျပေါငျးမြား မပါရှိသောကွောငျ့ ယားယံခွငျး မဖွဈနိုငျပါ။
တခြို့သော Cactus မြိုးနှယျဝငျ အပငျမြားတှငျ ဆူး သို့မဟုတျ အမှေးမြားကို တှရှေိ့ရပွီး
အရပွေားအတှငျး စူးဝငျခဲ့သျော နာကငျြမှု ဝတေနာကိုသာ ခံစားရပွီး ယားယံခွငျးမဖွဈနိုငျပါ။
ယငျးကဲ့သို့ဖွဈခွငျးသညျ အမှေးမြားတှငျ အဆိပျဓာတျပေါငျးမြား မပါဝငျ၍ ဖွဈသညျ။
ဥပမာ – ဆငျနှာမောငျးပငျ(Heliotropium indicum) တောကျတဲ့လကျဝါး(Coldenia procumbens L,.) ခရမျးခဉျြ( Tomato ) အစရှိသညျ့ အပငျမြားတှငျ တှရှေိ့ရသော အမှေးမြားဖွဈသညျ။
အမှေးမြားသညျ ယားယံသညျဖွဈစေ၊ ယားယံမှုမရှိသညျဖွဈစေ ၎င်းငျးတို့၏ အဓိကလုပျငနျးတာဝနျမှာ အပငျစားသတ်တဝါမြားကိုခုခံကာကှယျရေးအတှကျဖွဈသညျ။
သို့သျော အမှေးမြားသညျ ခုခံကာကှယျရေးအတှကျ သီးခွားတညျရှိနသေညျမဟုတျဘဲ အခွားသော
ဥပမာဆိုရသျော သဲကန်တာရတှငျပေါကျသော အပငျတခြို့နှငျ့ သဈပငျကွီးမြားပျေါတှငျ
ကပျပေါကျသော သဈကပျပငျ(Epiphytes)တို့၏ အရှကျမြားပျေါတှငျ အမှေးမြားပါရှိနပွေီး
၎င်းငျး အမှေးမြားသညျ လထေုထဲမှ ရခေိုးရငှေမြေ့ားကို တိုကျရိုကျစုပျယူနိုငျကွသညျ။
ပူပွငျးခွောကျသှသေ့ော ဒသေမြားတှငျ ပေါကျရောကျသော အပငျတို့သညျ ၎င်းငျးတို့အတှကျ
လိုအပျသော ရဓောတျကို အမှေးမြား၏ အကူအညီဖွငျ့ လထေုထဲမှ တိုကျရိုကျရယူ၍
အသကျရှငျသနျရသညျ။ ရစေုပျယူသညျ့ တာဝနျကို အမွဈတို့ကသာ ထမျးဆောငျနသေညျမဟုတျပဲ အမှေးတို့ကလညျး ကူညီလုပျဆောငျပေးရသညျ။ Carnivorous plants ဟု ချေါသော
အသားစားပငျမြားတှငျပါရှိသော အမှေးမြားသညျသားကောငျဖမျးရာတှငျ အထောကျအကူမြားစှာ
ရရှိစသေညျ။ ထို့အပွငျ အမှေးတို့သညျ မြိုးဆကျပြံ့နှံ့ရာတှငျလညျး အကူအညီရရှိစသေညျ။
အပငျတို့၏ ပငျပိုငျးအင်ျဂါမြားမှ အမှေးတို့သညျ ခုခံကာကှယျရေးရနျ အဓိကဖွဈသျောလညျး
အသီးနှငျ့ အစမြေ့ားမှ အမှေးတို့သညျ မြိုးပြံ့နှံ့ခွငျးအတှကျဖွဈပွီး အစခှေံ့တို့မှ ထူးကဲစှာဖွဈလာသော အမှေးတို့သညျ အစအေ့ား လနှေငျ့အတူ အလှယျတကူလှငျ့ပါ၍ မိခငျအပငျနှငျ့ ဝေးရာအရပျသို့ ရောကျရှိသှားသညျ။ ထိုကဲ့သို့ အသီးနှငျ့ အစမြေ့ား လအေကူအညီဖွငျ့
ပြံ့နှံ့ခွငျးကို(Seeds dispersal by Wind ) ဟူ၍ ချေါဆိုသညျ။
ဥပမာ – မုရိုးစေးပငျ( Calotropis procera )၊ လကျထုတျကွီး(Holarrhena antidysenterica)၊
ဒုဓလီပနျး(ခွင်ျသသှေ့ား)Dandelion(Lion´s tooth)၊ ဗိစပျပငျ( Eupatorium odoratum L. )၊
လကျပံခါး( Alstonia scholaris )၊ ကောကျရိုးနှယျ(Oxystelma esculentum)၊
ခှာညိုကွီး(Clematis smilacifolia Wall.) နှငျ့ ဆကျခြိုရဈ(Naravelia zeylanica) တို့ ဖွဈသညျ။
⁠ရေ၀ပ်⁠ခြင်း ⁠ပြဿနာ (Causes of Waterlogging)စပါးအထွက်တိုးရန် ကိုယ်တိုင်ေ⁠မြ⁠သြဇာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပါ။